Ho fankasitrahan'ny mpanjaka - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2015-02 mpandimby ny Magazine > Ho an'ny sitrapon'ny mpanjaka
Tahaka ny olona maro hafa, liana amin'ny fianakavian'ny mpanjaka britanika aho. Ny nahaterahan'ilay Printsy George vaovao dia tsy vitan'ny zava-nitranga manokana nanentana ny ray aman-dreny vaovao, fa natao koa ho an'ny tantara nentin'ity zazalahy kely ity.
Namaky boky momba ny mpanjaka sy ny kianjan'izy ireo aho ary nahita antontan-taratasy sy sarimihetsika ara-tantara. Nahavoa ahy fa ny olona manao ny satroboninahitra dia mitondra fiainana tsy azo antoka ary izay manakaiky ny mpanjaka dia manao toy izany koa. Indray andro izy ireo dia orinasa tian'izy ireo indrindra an'ny mpanjaka ary ny manaraka dia voatarika ho any amin'ny guillotine. Na ny mpitan-tory akaiky indrindra an'ny mpanjaka aza dia tsy azo antoka hoe mifikitra tsy tapaka izy. Tamin'ny andron'i Henry VIII, nirohotra matetika ny loha. Tamin'ny andro taloha, ny mpanjaka dia nanapa-kevitra nanapa-kevitra raha tiany ny olona na tsia. Mampiasa matetika ny olona izy ireo hampihatra ny drafitr'izy ireo manokana. Ny fitsarana ary indraindray na ny firenena iray aza dia nifoka rivotra rehefa maty ny mpanjaka satria tsy hainy raha toa izy ireo kokoa noho ny maty na ny mpanjaka ho avy.
Avy amin'izany dia afaka mahita mora foana ianao avy aiza ny maha-ara-dalàna ny faribolana Kristiana ary ny antony mahatonga anay mampifangaro ny toetran'Andriamanitra amin'ny toetran'ny mpitarika, ny ray ary ny manam-pahefana hafa. Ho an'ireo izay nipetraka tao amin'ny mpanjaka iray, ny mpanjaka dia saika mitovy amin'Andriamanitra. Ny nolazainy dia lalàna ary miankina amin'ny famindram-pony ny tsirairay, na dia heveriny ho lavitra loatra aza izy.
Raha tsy azontsika hoe iza no Andriamanitra, dia mety mino koa isika fa tsy ara-dalàna ny lalàny, miantehitra amin'ny fahatezerany isika, ary raha mijanona lavitra lavitra Azy isika, dia tsy ho hita isika. Na eo aza izany dia sahirana mikarakara ny rehetra izy. Lavitra izany, any an-danitra any. Na mihevitra isika fa tsy voavonjy raha manao ny zava-drehetra araka ny sitrapony: maro ny olona mino fa mety mahazo ny fankasitrahany ihany izy ireo raha ampy tsara amin'Andriamanitra. Tsy toy ny mpanjaka eto an-tany anefa Andriamanitra. Mifehy an'izao rehetra izao amin'ny fitiavana, fahasoavana ary hatsaram-panahy izy. Tsy mihetsika amin'ny antony tsy izy ary tsy milalao lalao amin'ny fiainantsika.
Mankasitraka sy manaja antsika Izy, tahaka ny zanaka noforoniny. Tsy manapa-kevitra hoe iza no miaina ary maty amin 'izao fotoana izao, fa mamela antsika hiaina amin'ny fiainany tanteraka sy handray fanapahan-kevitra manokana, ho an'ny tsara sy ho an'ny ratsy.
Tsy misy madiodio, na inona na inona fanapahan-kevitra raisiny, tsy mila miahy ny momba antsika raha ankasitrahan'i Jesosy Tompontsika isika na tsia. Miaina ao anaty sy amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay mandrakizay, feno fitiavana ary feno. Tsy misy fetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy omeny antsika io indray andro io ary ny ampitson'io dia eseniny amintsika izany. Tsy mila mitady azy isika. Hita hatrany ny fahasoavany, mitombo hatrany sy tsy misy fepetra, toa ny fitiavan'Andriamanitra ihany. Eo ambanin'ny fitiavana sy ny fikarakaràn'ny mpanjakantsika antsika dia tsy mila miahiahy momba ny lohanay isika satria mankasitraka hatrany antsika.
by Tammy Tach